मंगलबारदेखि एक साता देशभर लक डाउन, घरबाट बाहिर निस्कन नपाइने, उलंघन गरे कारबाही – सकारात्मक परिवर्तनवाहक विचार, कला/साहित्य र सत्य खवरको बाटाे
मंगलबारदेखि एक साता देशभर लक डाउन, घरबाट बाहिर निस्कन नपाइने, उलंघन गरे कारबाही
प्रकाशित मिति : २०७६ चैत्र ११
काठमाडौं । नेपालमा कोरोना भाइरसबाट थप एक व्यक्ति संक्रमित भएको पाइएपछि सरकारले देशभर ‘लक डाउन’ गर्ने निर्णय गरेको छ । उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा रहेको कोरोना भाइरस रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार उच्च स्तरीय समन्वय समितिको सोमबार साँझ बसेको बैठकले मंगलबार बिहान ६ बजेबाट देशभर एक साता ‘लक डाउन’ गर्ने निर्णय गरेको हो । सो अवधिमा सवारी साधन नदिइने र मानिसहरुलाई घरभित्रै बस्न लगाइने बताइएको छ ।
यसअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयले फ्रान्सबाट कतार हुँदै गत साता नेपाल आएकी एक छात्रामा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएको जानकारी गराएको थियो । ती छात्रालाई टेकुस्थित शुक्रराज ट्रफिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालको आइसोलेसन वार्डमा राखेर उपचार भइरहेको छ । उनको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको सरकारले जनाएको छ ।
यसैगरी सरकारको अत्यावश्यक सेवाबाहेकको कार्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । कर्मचारीहरुलाई घरमै तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिइएको छ । स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी बाहेक अन्य कर्मचारीलाई घरमा रहन भनिएको छ ।
त्यसैगरी समितिले नाका क्षेत्रमा भेला भएका नेपालीहरुलाई नेपाल प्रवेश गर्न दिन र क्वारेन्टाइनमा राख्न स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ ।
यस्ता छन् सरकारका निर्णयहरु ः
१. औषधि उपचार, खाद्य वस्तु खरिद जस्ता अत्यावश्यक काममा बाहेक नै पनि व्यक्ति घरबाट बाहिर ननिस्कने
६. व्यवसायीहरुले औषधि र औषधिजन्य सामग्रीहरुको नियमित आपूर्तिको व्यवस्था गर्ने। अभाव देखाई मूल्य वृद्धि गर्ने वा कालाबजारी, जम्माखोरी गर्ने वा लुकाउने वा आपूर्तिमा अवरोध गर्ने व्यक्तिलाई प्रचलित कानुनबमोजिम नियन्त्रणमा लिने सामग्री जफत गरी रोगको रोकथाम र उपचारको कार्यमा उपयोग गर्ने।
–संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलबाट प्रस्तुत कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) सम्बन्धी क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन मापदण्ड–२०७६ स्वीकृत गर्ने,
–स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नेतृत्वमा आजैदेखि बलम्बुस्थित सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको अस्पतालबाट कोभिड १९ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार सम्बन्धी कार्य नेपाली सेनाका चिकित्सकहरुको समन्वयमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र आवश्यकता अनुसार सरकारी, सामुदायिक र निजी क्षेत्रका चिकित्सक नर्स र स्वास्थ्यकर्मीहरु परिचालन गरी शुरु गर्ने। यसका लागि रक्षा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय गर्ने।
कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारसम्बन्धी उच्चस्तरीय समन्वय समितिले सरकारले तोकेको मापदण्ड उल्लंघन गरे कारबाही गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) लाई दिएको छ । सीडीओले स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को समेत प्रयोग गरी कारबाही गर्ने बताइएको छ ।
त्यस्तै संक्रामक रोग ऐन, २०२० अन्तर्गत पनि कारबाही हुन सक्ने बताइएको छ । सो ऐनमा जारी आदेशको अपहेलना गर्नेलाई एक महिना कैद र एक सय रुपैयाँ जरिवाना वा दुवैको व्यवस्था छ । त्यस्तै सरकारी अधिकारीको काममा बाधा पु¥याउने व्यक्तिलाई एक हजार रुपैयाँ जरिवाना र ६ महिना कैद वा दुवै हुन सक्नेछ ।
मानिसहरूको आवतजावत र घुलमिलबाट कोरोना संक्रमण सबैभन्दा छिटो सर्ने भएकाले संसर्ग रोकेर प्रकोप फैलिनबाट रोक्न ‘लकडाउन’ गरिएको सरकारले जनाएको छ । कोरोना भाइरसको प्रकोप फैलिएका विश्वका विभिन्न देश र शहरहरूमा अहिले यस्तो ‘लकडाउन’ गर्ने क्रम बढिरहेको छ ।
कोरोना भाइरस संक्रमण भएपछि सबैभन्दा पहिले चीनको वुहान शहरलाई यसरी नै ‘लकडाउन’ गरी प्रकोप नियन्त्रणमा लिइएको थियो ।